BIYO KU DAADI HOOYOOYINKA KALKAALISADA: WAA LAGAMA MAARMAAN IYO SUURTAGAL IN LA CABBO NUUJINTA IYO COLICAHA ILMO, SIDA LOO QAATO, WADDADA MAAMULKA IYO QIYAASTA, FAA'IDOOYINKA DHALLAANKA - BEER CAGAARAN
Faa'iidooyinka iyo waxyeelada biyaha dhiigga ee hooyooyinka kalkaaliyaha ah. Sidee iyo goorma u qaadanayaa sheyga?
Dill - daawo caan ah oo loo isticmaalo suxuuno kala duwan, oo faa'iido badan u leh jirka bini'aadamka.
Warshadu waxay ka kooban tahay waxyaabo badan oo ka mid ah walxaha bioactive ee leh saameyn togan ku leh jirka cunugga cusub ee ilmaha iyo naas nuujinta.
Hooyooyin badan oo nuujinaya ayaa doorbidaya in aysan u qaadan daawooyinka si loo kordhiyo nuujinta, laakiin biyaha dilladu waa badeecad dabiici ah oo wax ku ool ah.
Waa maxay biyaha this?
Biyaha daawada dufanka - saarista miraha fennel (dill farmash) ama saliid lagama maarmaanka u ah geedka. Xalka waxaa lagu iibiyaa dhalooyinka quraaradaha (mugga 15 ilaa 100 ml). Iyada oo qayb ka mid ah soo saaridda abuurka iyo biyaha la soo saaray. Ujeedada ugu weyn ee daroogada - caadigeynta habka dheef-shiidka.
Sidoo kale farmashiyaha, waxaad ka iibsan kartaa shaaha geedaha dhulka ilaa abuurka budada. Baakada waxaa ku jira bacaha 10 ama 30 oo bac.
Waxaad samayn kartaa biyo dill ah naftaada. Seeds of fennel ama dill ayaa loo isticmaalaa.
Miyaa la siin karaa naas nuujinta?
Haweenka naas-nuujinta ah waxaa lagula talinayaa in aysan ku koobneyn oo keliya cunto ay ku kiciyaan dill cusub, laakiin sidoo kale inay qaataan biyo dill. Badeecadu waa faa'iido weyn u leh noolaha hooyada.:
taageeraan nuujinta, waxay kicisaa wax soo saarka caanaha naaska;
waxay soo saartaa isku-dhafka ka yimaada sariirta lugaha iyo mindhicirka;
wuxuu yeeshaa saameyn yar oo calool-marijir ah iyo saamaynta duriinka, waxay ka hortagtaa caloosha iyo bararka;
waxay dhiirrigelisaa miisaanka lumitaanka xilliga dhalmada kadib;
dib u soo celinta soo noqoshada caadada;
waxay baabi'inaysaa gaaska xad-dhaafka ah iyo xanuunka spasmodic ee mindhicirka.
Ka faa'iideyso ilmaha
Biyaha dilladu way u wanaagsan tahay jirka, ma aha oo kaliya hooyada kalkaalisa, laakiin sidoo kale ilmo. Ma aha oo kaliya kicinta nuujinta, laakiin sidoo kale waxay kobcinaysaa caanaha naaska oo leh walxaha bioactive ee lagama maarmaanka u ah horumarka buuxa ee jirka ilmaha. Caanaha, cunista caanaha oo lagu kobciyo fiitamiinada iyo macdanta macdanta, ma lahan wax yar oo nafaqo ah waxayna si horumar ah oo firfircoon u horumarisaa.
Vodicka waxa kale oo ku jira maaddooyinka, haddii la soo miiray, baabi'iyo colic iyo calool-fadhiga, caadiyan ka shaqeynta habka dheef-shiidka dhallaanka.
Waxyaabaha kiimikada ee biyaha dill ku dhowaad la mid ah miraha dill.. Si kastaba ha ahaatee, waxaa si fiican loo nuugo, sidaas darteed saameyn ku daweynta waa mid aad u badan. Qeyb ka mid ah biyaha waxaa jira tiro badan oo ah walxaha bioactive ee ka faa'iideysta hooyada iyo ilmaha:
Saliidaha lagama maarmaanka ah ee tiknoolojiga iyo saameynta carminative;
phytoncides, carotenoids, flavonoids, oo leh saameyn antioxidant ah.
Faytamiinada waa in la xuso:
ascorbic acid (C) - 0.3mg halkii 100 g oo xal (0.3% ee heerka qiyaasta maalin kasta);
thiamine (B1) - 6 μg (0.4%);
riboflavin (B2) - 4 μg (0.2%);
niacin (B3) - 0.04 mg (0.2%);
pyridoxine (B6) - 4 μg (0.2%).
Halabuurka macdanta ayaa la soo bandhigay:
potassium - 17 mg halkii 100 g oo cabitaan ah (0.7% shuruudaha maalin kasta);
kalsiyum - 27 mg (2.7%);
birta - 0.2 mg (1.4%);
magnesium - 5 mg (1.2%);
Fosfooraska - 4 mg (0.5%);
zinc - 0.08 mg (0.6%);
Selenium - 0.2 μg (0.3%);
manganis - 0.03 mg (1.4%);
copper - 12 mcg (1.2%).
Dillwater waxaa loo muujiyaa sidii xal loogu heli lahaa haweenka naas nuujinaya.:
in laga takhaluso calool-galinta iyo ku-tallaalidda muddada dhalmada kadib;
caadeysashada xaaladda jirka ee jirka kadib uurka;
kicinta wax soo saarka iyo hagaajinta qoondeynta caanaha naaska;
ka hortagga calaamadeynta caanaha iyo bararka qanjidhada naasaha.
Vomichku hooyadu keligeed ma isticmaali karto, laakiin sidoo kale sii ilmaha todobaadkii labaad ee nolosha:
saarista gaasaska xiidmaha;
joojinta xanuunka colic;
xoojinta difaaca ilmaha;
si fudud loo nadiifiyo habka ilmaha mindhicirka iyada oo aan saameyn ku yeelan microflora caafimaad qaba;
Kicinta sixitaanka ee enzymes dheefshiidka.
Dhibaatooyinka, dhibaatooyinka iyo xasaasiyadaha
Isticmaalka badan ee isticmaalka daroogadu waxay sababi kartaa falcelin xun.:
cadaadiska dhiiga ee hooseeya;
falceliska maqaarka ee xasaasiyadda.
Dhiig-karka, waxaa jira suurtogalnimo ah in la xakameeyo lumen mareenka biliary ah, taas oo keenta xanuun culus oo ku yaal subkostal sax ah iyo matag.
Cabbitaanka ka soo abuurka fennel wax yar ka horjeeda. Lama qaadi karo:
idiosyncrasy of dill iyo fennel;
carruurta ka yar 2 toddobaad.
Biyo diiran - cabbitaanka guud ahaan waa mid aan dhib lahayn, cawaaqibka aan fiicneyn ee xadiga xad-dhaafka ah marar dhif ah ayaa leh muuqaal cadcad. Calaamadaha caadiga ah ee isticmaalka xad-dhaafka ah:
Haddii aad la kulanto astaamahan, waa inaad joojisaa inaad cabto cabitaanka.. Ka dib marka gobolku caadi yahay, biyaha la cabbo dib ayaa loo soo celin karaa, laakin adigoo si adag u ilaaliya qiyaasta lagu taliyey.
Sidee loo cabbaa: habka isticmaalka iyo qiyaasta
Dumarka dilladu ma aha wax alerjenik ah, sidaa darteed hooyooyinka waxay ku wanaajin karaan cuntadooda 10 maalmood ka dib dhalmada iyada oo aan waxyeello cunuga jidhkiisa. Cab maalin kasta 10 maalmood, ka dibna fasax 2 asbuuc ah ayaa la qaadayaa, ka dib markii kooraska dib loo celin karo. Qiyaasta lagu taliyey waa 3 jeer maalintii hal galaas, ama 6 jeer nus koob. Cab biyo qaarkood waa 30 daqiiqo kahor naas nuujinta.
Cunto-tallaabo tallaabo tallaabo ah
Diyaarso cabitaan dill ah oo kiciya nuujinta, baabi'iya colic ee ilmo, fudud. Saameynta wanaagsani waxay noqon doontaa mid xoog badan haddii maalin kasta la diyaariyo oo loo isticmaalo biyo cusub. Hoos waxaa ku qoran cuntooyinka faahfaahsan.
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo cunto karis ah.:
Qaado qaado oo ah miro, ku shub hal galaas oo biyo karkaraya, walaaqaya. Ka fogeeow cabitaanka ilaa 15 daqiiqadood si aad ugu foorno weel dabool leh. Diyaarsanaan macnaheedu waa cadaadis ku yimaada faashad ama dhar.
Qaado qaado oo ah dill la jarjarey, ku shub 0.5 litir oo biyo ah karkaraya. Fasax biyo ah ilaa 20 daqiiqo si aad u dillaacdo. Cadaadiska ka hor isticmaalka.
Bedelkii abuurka iyo caleemaha geedka, waxaad isticmaali kartaa saliida farmaajada fennel. Tani waa soo saarida qulqul sarre, markaa markaad wax cabbeyso, waa inaad si taxadar leh u eegtaa qiyaasta qaybaha, si aaney u waxyeeleynin jirka. Hal litir oo biyo ah waxay qaadataa 2 dhibcood oo saliid ah.
Iyada oo colka ilmaha
Bilaha ugu horreeya ee dhalmada ka dib, dhallaanku badanaa waxay qabaan colic, sababtoo ah nidaamkooda dheef-shiid kiimikaadka ayaa kaliya lagu sameeyay, enzymes for digesting food waxaa lagu soo bandhigaa tiro aan ku filnayn. Si loo hagaajiyo xaaladda ilmaha, hooyooyinka waxay cabbaan biyaha dillada..
Karinta waa mid fudud. A qaado oo ah abuur ah ku shubay galaas biyo ah karkaraya, ku adkeyso saacad. Cabbitaanka cadaygu wuxuu cabbaa 2 qaado oo cunto ah ka hor. Si caadi ah xaaladda ilmaha waa koorso 3 maalmood ah oo ku filan.
Haddii koorsada ay soo martay hooyadu aysan wax saameyn ah sameynin, markaa waxaa lagu talinayaa in la siiyo cabitaanka ilmaha.
Ilmo ilaa hal bil ah oo carrabka ku dhejiya ilaa 15 dhibcood oo lacag ah 2 - 3 jeer maalintii.
Cunug weyn oo cabitaan cabitaan ah ayaa lagu daraa dhalada caanaha hooyada laga soo saaro ama isku dhafka dabiiciga ah.
Qalabka qaabilaada ayaa ah mid sii wanaajinaya xaalada mindhicirka.
La dagaallanka cayilka
Dumar badan oo dhalashadooda dhaley ayaa la tacaalaya miisaanka dheeraadka ah ee la helay muddada uurka. Dill waa gargaar wax ku ool ah oo lagula dagaalamayo miisaanka xad-dhaafka ah.. Waxay ka kooban yahiin kaloori (4.5 kcal oo keliya 100 ml), waxaa ku jira walxaha ka jaraya calool-istaagga waxayna dardar-galinayaan gubista dufanka.
Si aad u diyaariso cabitaan miisaanka lumo qaado qaado qaado oo ah miraha, ku shub hal galaas oo biyo karkaraya. Cabbitaanka waxaa loo fidiyaa 1.5 saacadood, sifeeyaa. Waa lagama maarmaan in la cabbo macnaheedu waa meeshii shaaha inta u dhexeysa cuntooyinka.
Halkee laga gadan karaa iyo inta ay le'eg tahay?
Soo iibso biyaha dillada waxaa laga dalban karaa farmasiyada leh waaxda daawada. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa huuri fennel, taas oo ay tahay in si madaxbanaan loo qasi karo biyaha sida ku qoran tilmaamaha la socda. Xitaa hooyooyinka waxay diyaar u yihiin in ay qaataan farmashiyeyaasha dhirta dillaa "Plantex" bacaha wax lagu shiilo ee shaaha.
Vodichka ee qaybta rijeetada ayaa kharashka ku baxaysa 200 ilaa 250 rubuc.
Daroogada "Plantex" (30 boorso) ayaa ku kacaya 400 - 650 roon.
Kharashka ka soo bixidda ee fennel (15 ml):
magaalada Moscow - 175 - 280 rubaar;
ee St. Petersburg - 175 - 230 rubaar.
Daadirku wuxuu yareynayaa ilmaha caloosha, hooyadu waxay ka caawisaa inay la qabsato miisaanka xad-dhaafka ah, hagaajinta nuujinta, dib u soo celinta jirka ka dib dhalashada. Alaabada la dhamaystiray waxaa lagu iibiyaa farmasiyada, laakiin hooyooyinka badankood waxay sameeyaan qalabkooda. Cunnooyinka waa sahlan, waxaad isticmaali kartaa miraha fennel ama dill.